वास्तविक समय संचार: WebRTC के हो? | Martech Zone
बिहीबार, सेप्टेम्बर 5, 2019 सोमबार, अक्टोबर 5, 2020 सिएन्ना अमेलिया
वास्तविक-समयको संचारले परिवर्तन गर्दैछ कि कसरी कम्पनीहरूले उनीहरूको वेब उपस्थिति प्रयोग गरीरहेका छन् सम्भाव्यता र ग्राहकहरूसँग संवादको लागि।
WebRTC के हो?
वेब रियल-टाइम कम्युनिकेशन (वेबआरटीसी) संचार प्रोटोकोल र एपीआईहरूको स collection्ग्रह हो जुन Google द्वारा विकसित गरिएको थियो जुन सह-पिअर-पियर जडानहरूमा वास्तविक-समय आवाज र भिडियो संचार सक्षम गर्दछ। WebRTC ले वेब ब्राउजरहरूलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूको ब्राउजरबाट वास्तविक-समय जानकारी अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छ, वास्तविक-समय पियर-टु-पियर सक्षम पार्दै र भ्वाईस, भिडियो, कुराकानी, फाईल ट्रान्सफर, र स्क्रिन साझेदारी सहित समूह संचार।
Twilio - WebRTC के हो?
WebRTC सबै ठाउँमा छ।
२०१ 1.669 मा ग्लोबल वेबआरटीसी बजार १.2018 billion अर्ब अमेरिकी डलर थियो र २०21.023२ सम्ममा विश्वव्यापी २१.०२2025 अरब डलर पुगेको छ।
जिओन बजार अनुसन्धान
वर्षौं अघि, वेबआरटीसी एक वीओआईपी प्रोटोकल प्रदायकको रूपमा वेब ब्राउजर लक्षित शुरू भयो। आज, कुनै ब्राउजरले वेबआरटीसी कार्यान्वयन बिना अडियो / भिडियो स्ट्रिम गर्दैछ। यहाँ केहि विक्रेताहरू छन् जसले विश्वास गर्छन् कि WebRTC ले उनीहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्न असफल भएको छ, हुनसक्छ यो विक्रेताहरू हो जसले एक उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव लिनका लागि WebRTC को उपयोग गर्न असफल भयो।
WebRTC वेब ब्राउजर मार्फत वास्तविक समय कुराकानीहरू बढाउने बारे हो। हालसालै, गुगलले प्रकट गरेको क्रोमले मिनेटमा १. billion अरब भन्दा बढी साप्ताहिक अडियो / भिडियो राख्छ। त्यो लगभग छ एक दिन २१214 मिलियन मिनेट। र त्यो केवल क्रोममा छ! यहाँ WebRTC प्रयोग गरेर क्षमताहरूको एक विस्तृत हेराई छ।
के WebRTC संग वास्तविक-समय संचार उपलब्ध छ?
स्क्रिन सेयरि - तत्काल अन्य उपयोगकर्ताहरु संग सहकार्य को सक्दो लाभ लिनुहोस्। WebRTC 'एन्ड्रोइड / आईओएस भिडियो कुराकानी अनुप्रयोग दूर पहुँच स्क्रीन सक्षम गर्दछ अर्को उपकरण वा उपयुक्त पहुँचको साथ प्रयोगकर्ताको साथ टाढाबाट। WebRTC संकेतको साथ, आधुनिक रिमोट सहकार्य दुई अग्रणी संचार प्लेटफर्म प्रदायकहरू द्वारा स्थापित भइरहेको छ स्काइप& ऐना। स्क्रिन सेयरिंग सुविधाले अर्को स्तरमा सम्पूर्ण व्यावासायिक सहयोगलाई आधुनिकीकरण गर्दछ जहाँ बैठकमा आधारित कन्फरेन्सिंग यसको मौलिक कार्यहरू हो। छलफलदेखि प्रस्तुतिकरण सम्म, वेबिनरहरू बैठकहरू, स्क्रिन साझेदारी मुख्य कुरामा रहेको छ।
बहु-प्रयोगकर्ता भिडियो सम्मेलन - एक उदात्त बहु-प्रयोगकर्ता भिडियो कन्फरेन्सलाई धेरै प्रयोगकर्ताहरूको एक साथ ह्यान्डल गर्न धेरै स्केलेबिलिटी चाहिन्छ, यो त्यहि हो जहाँ WebRTC वेब च्याट खेलमा आउँदछ। WebRTC सिग्नलिंग सर्भरले एक वास्तविक समय र सहज मल्टि-पार्टी भिडियो र आवाज कल विश्वव्यापी गर्न अनुमति दिन्छ। वेबआरटीसी भिडियो र भ्वाइस कलले एक बहु-पार्टी भिडियो कलमा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई जडान गर्नको लागि मिडिया स्ट्रिमको न्यूनतम रकमको माग गर्दछ। WebRTC भिडियो कल अनुप्रयोग MCUs (बहुबिन्दु नियन्त्रण इकाइहरू) र SFUs (छनौट फर्वार्डिंग एकाइहरू) को माध्यमबाट बहु-पार्टी जडानको तराजू छ।
Ease मा सहयोग - ती दिनहरू जब तपाईं खाताको लागि साईन-ईन गर्न प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, प्लेटफर्म डाउनलोड गर्नुहोस् र कुराकानी गर्न अर्को प्रयोगकर्तासँग जडान हुन धेरै प्लेटफर्महरू स्थापना गर्नुहोस्। WebRTC भ्वाइस र भिडियो च्याट सर्भरको साथ, कुनै परम्परागत प्रक्रियाहरू छैनन्। WebRTC पाठ कुराकानी यसलाई सहज र सहज अनुभवको अनुभव गर्न अधिक सुविधाजनक र सरल बनाउँदछ। वास्तविक समय सहयोग WebRTC समर्थित ब्राउजरहरूको साथ स्थापित प्लेटफर्महरूमा सरल बनाइएको छ।
फाइल शेयरिङ - विशाल डाटाको प्रसारण सँधै असभ्य र कठिन कार्य भएको छ जहाँ प्रयोगकर्ताले अन्य अनुप्रयोगहरू जस्तै ईमेल वा ड्राइभमा स्विच गर्न नेतृत्व गर्दछ। डाटा ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रिया यति सरल छैन, यसले धेरै समय, प्रयास र डाटा खपत गर्‍यो। एक WebRTC सिग्नलिंग सर्वरको साथ, यसले प्रक्रियालाई नै एम्बेडेड वेबसाइट मार्फत सिधा पठाउन दिएर संकुचन गर्दछ भिडियो कल एपीआई। र अगाडि, WebRTC ले फाईलहरू अल्ट्रा-कम लेटेन्सीमा प्रदान गर्न दिन्छ जुन जे भए पनि ब्यान्डविथ। यसको शीर्षमा, WebRTC ले एक सुरक्षित छत मुनि डेटा प्रसारण गर्दछ।
बहु-सुरक्षित भिडियो र भ्वाइस संचार - वेबआरटीसी सिग्नलिंग वेबसोकटहरूले मजबूत आरटीपी प्रोटोकल (एसआरटीपी) को साथ प्रदान गर्दछ जसले एन्ड्रोइड, आईओएस र वेब अनुप्रयोगहरूमा प्रसारित सम्पूर्ण वेबआरटीसीको समूह भ्वाइस च्याटलाई एन्क्रिप्ट गर्दछ। साथै, यसले कलको अनावश्यक पहुँच र रेकर्डि fromबाट कल सुरक्षित गर्न वाइफाइ मार्फत संचारको लागि प्रमाणिकरण उत्पन्न गर्दछ।
प्रत्यक्ष संचारको लागि वास्तविक समय सेवाहरू - WebRTC सँग कुनै पनि अनुप्रयोगसँग समाहित गर्न सम्भावित क्षमताहरू छन् भरभरिको प्रत्यक्ष कुराकानीको अनुभव लिनका लागि। WebRTC पूर्वाधार र भिडियो च्याट SDK प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न प्रत्यक्ष मार्ग सिर्जना गर्दछ जेसुकै उद्योग, रिटेल, ईकामर्स, स्वास्थ्यसेवा, ग्राहक समर्थनबाट, यसले वास्तविक-समय संचार सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
कम लेटन्सी नेटवर्किंग - वेबआरटीसी एकीकरणको साथ भिडियो कल एपीआई सर्वरहरूको श्रृंखलामा नजोडी सम्बन्धित उपकरण वा अनुप्रयोगमा सिधा डेटा साझेदारी गर्न सक्षम गर्दछ। इन्टर-ब्राउजर पहुँच कम विलम्बता नेटवर्क मा डाटा प्रवाह र लाभ प्रसारण को स्ट्रिमलाइन। WebRTC ले सक्षम अनुप्रयोग च्याट अनुप्रयोगको सन्देश र फाईलहरूको बृहत् प्रवाह अनुभव गर्दछ अन्य अनुप्रयोगमा ब्यान्डविथको वेबसाइटको स्वामित्व बिना नै।
Node.js प्रयोग गरेर एक WebRTC भिडियो कल
यहाँ एक महान पदयात्रा को माध्यम बाट छ कसरी भिडियो कल र भ्वाइस च्याट अनुप्रयोगहरू WebRTC र Node.js जाभास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क प्रयोग गरी काम गर्नुहोस्।
मिररफ्लाइ प्रयोग गरी WebRTC एकीकृत गर्नुहोस्
आज सुरू गर्न चाहनुहुन्छ? मिररफ्लाइको वास्तविक समय जाँच गर्नुहोस् कुराकानी एपीआई। तिनीहरूको कुराकानी एपीआईको साथ, तपाईं विविध सुविधाहरू र प्रकार्यहरू प्रयोग गरेर बहुमुखी सन्देश अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू वेब अनुप्रयोगहरूको लागि वास्तविक समय एपीआई र एन्ड्रोइड र आईओएस मोबाइल अनुप्रयोगहरूको लागि एक एसडीके प्रस्ताव गर्दछ।
टैग: Google +वास्तविक समयrtcस्क्रीनसेयरिsdkभिडियो सम्मेलनwebrtc
Sienna एक भ्रामक पाठक, भावुक लेखक, चलचित्र बफ, wenderlust व्यक्तिगत र अधिक धेरै हो। मलाई टेक्नोलोजीको बारेमा लेख्न मनपर्छ र यो तपाईंको दैनिक जीवनमा कसरी मिल्दछ।